Vohitr’i Ségou: Isan’ireo Mpifaninana Amin’ny Dingana Famaranana Amin’ny BOB I Boukary Konaté · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2012 0:32 GMT
Mpandika tenin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay sady misolotena ny tetikasa Ségou Villages Connection tohanan'ny Rising Voices i Boukary Konaté.
Misy galona hafa indray ny satrony amin'ity taona ity. Tafiditra ao anaty lisitr'ireo hiatrika famanranana amin'ny Bilaogy Tsara indrindra (BOB) i Boukary, hetsika isan-taona karakarain'ny Vondrona Media Deutsche Welle hanomezana maripankasitrahana ho an'ireo bilaogy sy ireo mpitoraka bilaogy izay nanamarika ny fiarahamonina, vondrom-piarahamonina misy azy na tamin'ny fomba ahoana na ahoana, ary nandray anjara tamin'ny fanandratana ny fahalalahana miteny.
Mifaninana anatin'ny sokajy “Fanabeazana sy Kolontsaina” amin'ny alàlan'ny bilaoginy manokana Fasokan i Boukary, amin'ny teny Frantsay sy Bambara.
Manandratra ny tenin'ny tompon-tany sy ireo kolontsaina amin'ny teny roa fampiasany sy ny bilaoginy manokana ny Fasokan any Mali. Nampiditra ireo olon'ny vohitra tamin'ny aterineto sy ny fikarohana fototra ao amin'ny Aterineto izy nandritra ny fitsidihana ara-panabeazana tany amin'ny reniranon'i Niger tany Mali.
Boukary Konaté miaraka amin'ny karatra fandraharahan'ny Global Voices. Sarin'ny workshop.segou
Ao amin'ny fanolorana ny bilaoginy, manoratra i Boukary:
Tsy mivoatra ho azy ny teny, ny mpiteny azy no mampivoatra azy. Ny kely afaka ataoko hampivoatra sy hanandratana ireo teny Afrikana, ataoko izany, mba hiampitan'ireo tenintsika ny renirano sy haka toerana eny anivon'ireo teny hafa any amin'ny sehatry ny fahalalàna sy ny fifanakalozam-baovao ary ny fizaràna, izay ny Aterineto. Fasokan, vohikala iray amin'ny teny nasionaly, Bambara, Mali
Afaka manohana an'i Boukary amin'ny alalan'ny fifidianana ny bilaoginy ianao. Nanomboka ny latsa-bato ary hitohy hatramin'ny 1 Mey.
Ny hany ataonao dia ny miditra ao amin'ny vohikalan'ny BoB, misafidy ny sokajy “Fanabeazana sy Kolontsaina”, misafidy ny Fasokan amin'ny vohikala ary mandatsa-bato.
Holazaina ao amin'ny vohikalan'ny BOB ireo mpandresy rehetra ny 2 Mey.
Sary avy ao amin'ny vohikalan'ny BoB
Boukary, izay mitoraka bitsika ihany koa amin'ny anarana Fasokan, manoratra hoe:
@Fasokan (Boukary Konate): Mitohy ny latsa-bato, fidio eto i Fasokan.
21 ora izayAmerika Latina
21 ora izayOseania